lolo mamirapiratra ho an'ny tafo na rantsana China Manufacturer
Description:Mivadika ho rivotra,Fangatahana fiakaran'ny hafanana,Roof De-icing System
Home > Products > Fihetseham-pandrefesana ny fitrandrahana Snow systerm > Fihirana hafanana mafana amin&#39;ny fiarovana ny saha > lolo mamirapiratra ho an&#39;ny tafo na rantsana
ny trano fisotroana tafo fanitso, ny tafo fanitso, ny tafo fisakafoanana, ny kitapo fisakafoana, ny kitay. , Manatsara ny fahasimbana ho an'ny tranonao, Manan-karena amin'ny horonan-tsarimihetsik'i Infrared ho an'ny fantson-drakitra.Ity mora ny mametraka sy mihetsika.Ity mora ny manadio sy portable.we dia matihanina sy mpitarika Shinoa mpamokatra ny sarimihetsika hafanana, Options manokana (ohatra: Ny fitaovana SMT, cable cables sy connectors) dia afaka manome ny vahaolana tonga lafatra izay mety hampihenana ny fotoana fivoriana sy hampitomboana ny vokatra. Manamboatra karazana endrika samihafa, sy ny endrika samihafa. Ny fonosana ao anatin'io solaitra io ihany dia azo atao sy mifantoka amin'ny fitazonana ny fifamoivoizana, miandrandra ny fiaraha-miasa.
Mivadika ho rivotra Fangatahana fiakaran'ny hafanana Roof De-icing System Miposaka ny rivotra Miaro ny fakan-drivotra Miaramila fonosana fiasan-drivotra Tafio-drivotra Mivadika ny Matsom-bahoakany